Home » Lahatsoratra » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » WestJet dia namoaka ny valin'ny herinaratra tamin'ny Andron'ny Tany
WestJet dia namoaka ny valin'ny herinaratra tamin'ny Andron'ny Tany
Aprily 23, 2012
CALGARY, Kanada - WestJet androany dia naneho ny fanavaozana ny tontolo iainana vaovao indrindra, fitaterana entana izay mandeha amin'ny bateria polymer lithium azo averina. Ny tug, izay mitovy amin'ny traktera kely, dia misarika sarety mitondra entana ho any sy miverina amin'ny fiaramanidina ary izy no karazany voalohany miasa amin'ity karazana bateria ity.
Ao anatin'ny tetik'asa mpanamory fiaramanidina dia niasa niaraka tamin'ny Corvus Energy, orinasa teknolojia monina ao Richmond, ny injeniera hamerenany indray ny tug mba ampiasain'ny bateria polymer lithium, manala ny filàna solika fôsily hampandeha ireo fitaovana. Ny tug, izay nanomboka niasa tamin'ny volana oktobra tao amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Calgary, dia nahavita tamim-pahombiazana tamin'ny hafanana mangatsiaka, tsy nisy tranga, nandritra ny ririnina.
"Ny fampiharana an'io haitao vaovao io dia ampahany lehibe amin'ny fanoloran-tenantsika maharitra amin'ny fitohizan'ny tontolo iainana," hoy i Cam Kenyon, filoha lefitra mpanatanteraka WestJet, Operations. "Amin'ny maha zotram-piaramanidina anay dia mino ny fampiasam-bola amin'ny hevi-baovao izay hanampy amin'ny fitazonana ny fikojakojana sy ny vidin'ny solika izahay, izay mamela anay hanohy hanome saran-dàlana ambany sy lanja ambony ho an'ireo vahininay."
"Ny fampidirana am-pahombiazana ny rafitra bateria lithium ion an'ny Corvus Energy ao amin'ny fitaovan'ny WestJet dia fanohanana lehibe ny teknolojia misy antsika," hoy i Brent Perry, tompon'andraikitra ambony an'ny Corvus Energy. "Ny fampidirana ny vahaolana lithium ion GSE dia fampandrosoana lehibe ho an'ny sehatry ny seranam-piaramanidina eo amin'ny lafiny fiantraikan'ny tontolo iainana sy ny fiarovana ny mpiasa ary faly izahay fa izy no lohalaharana."
Ny sidina dia maniry ny hanatsara ny tariby elektrika mandritra ny taona maro hoy i Perry. “Hatramin'izao, ny vahaolana tokana dia tsy misy afa-tsy ny teknolojia bateria izay tsy mila fikojakojana, miasa amin'ny hatsiaka na hafanana mafana be, ary koa ny fandefasana haingana ny haitao misy ankehitriny. Izy io dia maneho fandrosoana lehibe amin'ny indostrian'ny seranam-piaramanidina misy tsena lehibe. "
Ny fanovana ny herinaratra mandeha amin'ny herinaratra dia namela ny zotram-pitaterana hanohy hifantoka amin'ny fahombiazana ara-potoana, satria ny entana dia azo entina mankany sy avy amin'ny fiaramanidina amin'ny sidina 11 eo ho eo isan'andro amin'ny vola iray ihany.
Amin'ny volana Mey, fanaterana enta-mavesatra elektrika roa no ho tonga any Whitehorse hanombohana asa fanompoana isan'andro any an-toerana, izay manomboka amin'ny 17 Mey. Manantena ny fahombiazan'ny haitao ny teknolojia amin'ny toetr'andro mangatsiaka ao Yukon izay ahitan'ny bateria-asidra mitarika hatsiaka sy tsy azo averina indray mipi-maso, ary raha tsy avela hilona herinaratra ny entona entona an-tseranana.